FIOMBONAM-BEN’NY MPIASAMPANJAKANA : HILAHATRA ENY AMIN’NY LALAN’NY FAHAFAHANA – MyDago.com aime Madagascar
FIOMBONAM-BEN’NY MPIASAMPANJAKANA : HILAHATRA ENY AMIN’NY LALAN’NY FAHAFAHANA
Vory lanona tetsy amin’ny Carlton Anosy ny tolankandro teo ireo mpiasam-panjakana izay mivondrona ao anatin’ny fiombonam-ben’ny mpiasam-panjakana. Nanana solontena tao avokoa ireo sendika isan-kazarany eto amintsika, izay notarihin’ireo filohany avy, toy ny SMM, ny SEMPAMA, Ny PARAMED, ny SECES, ny Mpiasam-panjakana snsn.. Sambany eto amintsika hoy izy ireo no natao hanehoana amin’ny fomba ofisialy ary matotra izany fiombonana sy fiarahana amin’ny mpiasampanjakana izany. Araka ny nambaran’andriamato Auguste Arnaud filohan’ny SMM dia mahatsapa izy ireo fa manana anjara toerana ny sendika. Lazaina hoy izy fa manohitohia ny firenena nef azo fototra izany. Fitakiana mitombina no ataonay nefa ny mampalahelo fa hanaovana antsonjay. Tsy rariny izany hoy izy satria tsy mila filambaninny amin’ny fitondrana ny sendika. Nankahery ireo sendika namany ihany koa ny tenany. Tsy maintsy mandray andraikitra isika hoy andriamatoa Rakotoniasy avy amin’ny sendikan’ny mpiasam-panjakana fa tsy vanimpotoanan’ny fanilikilihana intsony izao. Tsy misy manaraka ny lalàna intsony hoy izy ny asam-panjakana eto amintsika. Noho izany dia tsy maintsy avoaka ny didim-panjakana fampiharana ny grille indiciaire. Aza ahilikilika ny mpiasam-panjakana hoy izy fa tsy afa miala amin’izao famahana ny krizy izao. Niray feo ny rehetra teny an-toerana fa hanatanteraka hesika lehibe etsy amin’ny lalan’ny fahafahana eny Anosy rahampitso manomboka amin’ny 10 ora maraina. Handray anjara amin’izany avokoa ireo sendika rehetra ao anatin’ny mpiasam-panjakana. Hiato daholo izany ny asam-panjakana rahampitso.
8 réflexions sur « FIOMBONAM-BEN’NY MPIASAMPANJAKANA : HILAHATRA ENY AMIN’NY LALAN’NY FAHAFAHANA »
Raha ny fazahoako azy dia mijanona ny filaharana (na grevy tsy hay intsony izy ity !!!)
raha toa ka mahazo ny « grille indiçiaire » tadiaviny ry zareo mpiasa-mpanjakana?
dia any ny anareo vahoaka izay tena mijaly fa ny anay ny karamanay izay efa azonay tsy tapaka no mba tianay hiakatra,koa na mpanongam-panjakana eo na iza dia ny anay ny karamanay ihany no ady eo !!!!!!!!! Mahavità be re ra-mpiasa-mpanjakana ô! ho tsarain’ny tantara eny ihany ny zava-bitanareo.
tena lasa zao de zao!nahazo lehiben,ny malaso tany besalampy sy mpitsara mano politika fopla!aiza re zany fahaizana e!nividy diplaoma tokoa matoa mirefarefa miaraka @besolomaso eto ka!
rakrisy dit :
10 juillet 2012 à 19 h 17 min
kely finoana aho @izao ekipa izao!tsy manakivy aloha fa tohizo ao !maivana be ilay ekipa;volan,i dada moa no alaina ka tsy maintsy mody mihetsika !i dada ve mbola afaka manadihady sa misy mpanoro vilana
Raha fisondrotan-karama, azo avy amin’ny vola sandoka sy halatra, bois de rose sy volamena sns…no takianareo, dia naman’ny mpangalatra ihany koa ianareo, koa aza adino izany !!
Dia maninona no 1 andro mora ny greve, dia maninona tsy eny amin´ny 13 MAi , dia aiza ireo mpiasan´ny minister rehetra koa, alefaso ny blocage Administratif ,fa aza be resaka eo nefa miandry anjara vola fotsiny, tairo tahaka ny t@ 1991 sy 2002 dia lasaizao tsa mipody koa.
1 andro monja no tiako soratana
Tsy henonao angaha ny fanazavana tao @ gtt.org??
fanomboana io ( raha tsy misy mibolisatra) efa ao daholo
ny mpitsara ny banky foibe ilay tena tanjany aloha efa ao daholo e!!lasa izao raha sy mibolisatra!
Mivavaha mafy e!!homba antsika Atra e!!!
Mba hilazao vao2 izay niseho t@’ilay hetsika androany
izay mba manana eeeee!!azafady Tompoko isany!
Précédent Article précédent : TIM ANTANANARIVO RENIVOHITRA : HANAO HETSIKA LEHIBE
Suivant Article suivant : RAVELOSON CONSTANT : NY TONDROZOTRA IHANY NY ANTSIKA